Fifampikasohana sy fifaneraserana: tratran’ny coronavirus ny fianakaviana iray etsy Bekiraro | NewsMada
Fifampikasohana sy fifaneraserana: tratran’ny coronavirus ny fianakaviana iray etsy Bekiraro
Ho mafy sy ho sarotra ny raharaha. Anisan’ny tratran’ny coronavirus vokatry ny fifampikasohana sy fifaneraserana ny fianakaviana iray etsy Tetezan’i Bekiraro. Raikitra avy hatrany asan’ny ekipan’ny fahasalaman teny an-toerana.
Nifandray sy nifanerasera tamin’ny mpivady malagasy sy vazaha avy any ivelany tamin’ny sidina avy any Frantsa ity fianakaviana iray monina etsy Isotry, Tetezan’i Bekiraro ity. Tafiditra amin’ireo olona 65 tratran’ny valanaretina covid-19, taorian’ny fitiliana teny amin’ny Institut Pasteur (IPM) ilay mpampianatra etsy amin’ny lisea Ampefiloha sy ny sasany amin’ny vady aman-janany. Tratran’ny coronavirus avokoa ny sasany amin’izy mianakavy ireo izany.
Nanomboka, omaly avy hatrany ny fidinana ifotony teny an-toerana nataon’ny ekipan’ny fahasalamana. Anisan’izany ny eny amin’ny manodidina ny Tetezan’i Bekiraro sy Isotry iny.
Nifanerasera tamin’ny olona miisa 385
Miisa 385 ny lisitr’ireo olona nifanerasera tamin’ity fianakaviana ity, tsy maintsy hanaovana fitiliana. « Namindra tamin’io raim-pianakaviana io ilay teratany vahiny. Misy amin’ny vady aman-janany koa tratra rehefa natao ny fitliana azy ireo », hoy ny minisitra Lalatiana Andriantongarivo, teny an-toerana. Hiroso amin’ny fijerena sy fizahana ireo nifanerasera tamin’ity fianakaviana ity ny ekipan’ny fahasalamana. Efa nanome io lisitra olona 385, nifandray tamin’izy ireo io rahateo ity tokantrano ity.
Niditra any anelanelan-trano ny ekipa medikaly
Niditra any anaty elakelan-trano izany ny ekipa ary hanontany sy hanadihady. Hanaovana fitiliana TDR ireo olona ireo rehefa hita. Mbola hiitatra koaanefa izany satria nifanerasera tamin’ny olon-kafa koa ireo 300 mahery ireo. Ho tahaka izany hatrany.
Ankoatra izany, horaisina sy hotiliana amin’ny toerana manokana eo Tetezan’i Bekiraro ireo tsy tratran’ny ekipa any an-tokantranony… Tsy mbola nahitana tranga aloha ireo vita fitiliana, omaly hariva. Hanaovana hetsika manokana tahaka izany koa ny any Toamasina, anisan’ny nisehoan’ny tranga vokatry ny fifampikasohana sy fifaneraserana.